Ciyaaraha | Mustaqbal Radio | Page 126
Home - Barnaamijyo - Ciyaaraha (page 126)
City oo wajaheysa dhibaato dhanka gool hayaha ah , kadib dhaawac soo gaaray Bravo.
Kooxda Manchester City ayaa wajaheysa dhibaato dhanka gool hayeyaasha ah kadib dhaawac soo gaaray gool hayahooda Claudio Bravo. Claudio Bravo ayaa dhaawac waxa uu ka soo gaaray Kubka waxaana uu garoomada ka maqnaanayaa SaddexdaTodobaad ee soo aadan. Gool hayahan ayaa dhaawaca waxa uu gaaray kulankii Manchester Derby ee dhacay Khamiistii waxaana tijaabadii Shalay lagu xaqiijiyay inuu garoomada ka maqnaanayo 3 ...
Waa kuwee ciyaar yahanada mushaar ahaan ka hooseeya kadib saxiixii Lovren.
Kooxda Liverpool ayaa heshiis waqti kordhin ah ka saxiixatay daafaceeda Dejan Lovren kaasi oo heshiiska cusub uu ka dhigayo in todobaadkiiba uu kooxda ka qaadanayo £100,000 oo Pound oo udhiganta 115,000 oo Euro. Kadib saxiixa Liverpool ee Dejan Lovren waxaan dib ufiirineynaa ciyaar yahanada ugu badan ee mushaar ahaan ka hooseeya kan uu Dejan ka qaato kooxdiisa. SADIO MANE | ...
Arsenal oo guul dirqi ah ka gaartay kooxda horyaalka difaacaneysa ee Leicester city.
kooxda arsenal ayaa guul ay u haraaday ka gaartay xalayto kooxda Leicester City ciyaar ka dhacday garoonka gunners ee Fly Emirates Stadium. xidigaha gunners ayaa dardar kusoo galay ciyaarta weeraro badan ayayna ku qaaden difaacyada Emirates leicester city kuwaa oo iyana xalayta difaac adeeg ciyaaraye. daqiiqadii 86-aad ayaa kubad garabka uu ka keenay alexis sanchez ay iska soo saareen xidigaha kooxda foxes ...
Paul Pogba oo ka maqnaanaya kulanka derby Manchester Derby.
Paul Pogba ayaa maqnaanaya kulanka caawa ee manchester derby sababo la xariira daawac uu qabo xidigan,macalin kooxda ayaa sidaa xaqiijiye. xidiga xulka france ayaa laga saaray ciyaartii todobaadkan kooxdiisa 2-0 kaga adkaatay kooxda burnley maalintii axada,mourinho ayaana qiray in xidigan uu ka cabanayo dhaawac muruqa ah. inkastoo aan la qeexin xaalada dhaawiciisa inta uu la egyahay hadana maamulhiisa kooxda ayaa ...
Manchester unitted oo dalab u gudbineysa gool hayaha kooxda Atletico madrid
manchester unitted ayaa wadaxaajood la fureysa wakiilka shabaq hayaha kooxda Atletico Madrid jan oblak sida ay qoreyso majalada manchester evening news. manchester unitted ayaa ka cabsi qabta iney lumiso david De gea kaa oo dalabyo ka helaya kooxda Real madrid,waxa ayna hada Red devills ku qasbantahay iney raadiiso badalka ciyaaryahankan. Gool hayaha Slovenia u dhashay ayaa daneyna isna in uu ka ...
Diego Costa oo xidigo badan ku garaacay gaarista goolka 50-aad ee EPL-ka.
Weerar yahanka kooxda Chelsea Diego Costa ayaa dhaliyay goolkiisa 50-aad ee waayihiisa Premier League kooxda Chelsea kulan ay xalay 4:2 kaga adkaadeen Southampton. Costa ayey ku qaadatay dhalinta 50 gool kaliya 85 kulan waana mid uu kaga wanaagsan yahay ciyaar yahankii hore ee Liverpool Luis Suarez. Costa ayaa sanadii 2014 kusoo biiray kooxda London ka dhisan markaa oo uu kasoo ...
Harry Kane oo sii dheereysan kara Rikoorka gool dhalinta London Derby.
Weerar yahanka kooxda Tottenham Harry Kane ayaa ah ciyaar yahanka ugu badan ee gool ka dhaliyay kulamada London Derby waxaana uu iminka leeyahay 22 gool. Kane ayaa 22-kaas gool kawada dhaliyay kooxaha ay London ku xafiltamaan waxaana kooxaha ugu badan ee uu gool kaga dhaliyo kulan London Derby ah ay yihiin West Ham United & Arsenal. 23 sano jirka weerarka ...
Cavani oo heshiis cusub usaxiixay kooxdiisa PSG.
Weerar yahanka kooxda Paris St-Germain iyo xulka Uruguay Edison Cavani ayaa heshiis waqti kordhin ah usaxiixay kooxdiisa PSG. Heshiis kordhinta Cavani ayaa la micno ah in weerar yahanka Uruguay uu Parc des Princes sii joogayo inta laga gaarayo sanada 2020-ka. Cavani ayaa kooxda caasimada France ka dhisan kusoo biiray xagaagii 2013 markaa oo uu kasoo dhaqaaqay kooxda Talyaaniga ka dhisan ...
James Rodriguez oo doorbidaya inuu la heshiiyo Mourinho & Man Utd.
Ciyaar yahanka Xulka Colombia iyo kooxda Real Madrid James Rodriguez ayaa ku jahwareeray garoonka kooxda Madrid ee Sentiago Bernabeu waxaana uu ku jiraa kala xulashada kooxdii uu ku biiri lahaa. James ayaa heysta dalabyo dhowr ah oo kasoo gaaray kooxaha ugu waaweyn Europe haba ugu horeeyaan kooxaha ka dhisan horyaalka England ee Chelsea & Manchester United. Sida ay kusoo warameyso ...
Rikooradii laga bartay kulankii Chelsea iyo Southampton.
Kooxda Chelsea ayaa xalay guul muhiim u aheyd ka gaartay kooxda Southamton kadib guul daradii ugu dambeysay oo ay horyaalka ka qaateen kooxda Manchester United. Blues ayaa markan hogaanka ku heysa 7 dhibic inkastoo weli aysan ciyaarin kooxda Tottenham oo ah kooxda kusoo xigta Chelsea. Hadaba waxaan dib umilic saneynaa kulankii xalay ka dhacay Gegida Stamford Bridge ee magaalada London ...
10-ka Ciyaar yahan ee ugu mushaarka sareeya Horyaalka MLS-ka.
Horyaalka dalka Mareykanka ee Mahjor League Soccer waxaa ka ciyaara xidigo badan magac ku leh dunida kubadda cagta haba ugu badnaadaan kuwa Europe & America kasoo jeeda. Ciyaar yahanka Germany udhashay ee Bastian Schweinsteiger ayaa bishii hore beeca xorta ah kaga dhaqaaqay kooxda Manchester United waxaana uu ku biiray kooxda Chicago Fire. Schweinsteiger ayaa kamid noqday liiska 10-ka ciyaar yahan ...
Chelsea oo guul gaartay siina xajisatay hogaanka horyaalka.
Kooxda Chelsea ayaa dib usoo celisay farqiga 7 dhibic ay ku hogaamineysay horyaalka kadib markii ay Stamford Bridge ku garaaceen kooxda Southampton. Kooxda Macalin Antonio Conte ayaa Sabtidi guul ka gaartay kooxda ay London ku xafiltamaan ee Tottenham markaa oo ay kaga adkaadeen Afar dhamaadka FA Cup-ka kadib guul daradii Manchester United kasoo gaartay. Eden Hazard iyo Diego Costa ayaa ...
Page 126 of 281« First...100110120«124125126127128	»	130140150...Last »